Lautaro Martínez Childhood Akụkọ gbakwunyere Eziokwu Biography Eziokwu
Home AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKW FOKWỌ Ndị na-egwu egwuregwu bọọlụ Argentine Lautaro Martinez Childhood Akụkọ gbakwunyere Eziokwu Biography Eziokwu
LB na-egosi Full Story of a Football Genius with the nickname "Oke ehi“. Anyị Lautaro Martinez Child Akụkọ ya na enweghị akwụkwọ akụkọ Eziokwu na-ewetara gị akụkọ zuru oke nke ihe ndị ama ama site na mgbe ọ bụ nwata ruo ụbọchị.
Lautaro Martínez Akụkọ Nwatakiri - Nyocha rue ụbọchị. Kpee OLE.
Ee, onye ọ bụla maara ya dị ka ọla Argentine ahụ na onye na-egwu egwu nke ukwuu na asọmpi 2019 COPA America. Agbanyeghị, ọ bụ naanị mmadụ ole na ole na-atụle akụkọ ndụ Lautaro Martinez nke bụ ihe na-atọ ụtọ. Ugbu a na-ebuteghị ọzọ, ka anyị bido.
Lautaro Martínez Akụkọ nwata - Mmalite Ndụ na Ezinụlọ:
Na-amalite, aha ya zuru oke bụ Lautaro Javier Martínez. Lautaro Martinez dị ka a na-akpọkarị ya mụrụ na ụbọchị 22nd nke July 1997 nye nne ya, Karina Vanesa Gutiérrez na nna, Mario Martínez n'obodo Bahía Blanca nke Argentine (foto dị n'okpuru).
Lautaro Martínez Ebe amụrụ- Obodo Argentine nke Bahía Blanca. Ebe E Si Nweta: N-Provinciale.
Nwa amuma a nke na-eto ngwa ngwa site na ezi na ulo ndi Latin American bu onye amuru dika umu nwoke nke abuo na umuaka nke ndi nne na nna ya mara nma.
Foto nke ndị nne na nna Lautaro Martínez. Ebe E Si Nweta IG.
Ọzọkwa, site na nchọta anyị, ọ dị ka Lautaro Martinez enweghị nwanne nwanyị. Ya na nwanne ya nwoke nke okenye aha ya bụ Alan toro na nwanne ya nwoke aha ya bụ Jano bụ onye na-ese onyinyo n'azụ nna ha n'okpuru.
Lautaro Martínez na nwanne na nna. Ekele diri IG.
Agbanyeghị na o toro n'obodo mara ọgaranya, Lautaro Martinez, nwere ezigbo ọzụzụ na ezinaụlọ a na-enweghị ihe ọ ga-anya isi ma ọ bụghị maka ncheta ochie nke ọrụ nna ya dị ka onye na-agba bọl.
Lautaro Martínez Nwata Bio - Nkuzi na Ulo oru:
Ruo ọtụtụ afọ, o siiri nna Lautaro ike obibi ezumike nká site na football. Naanị ihe ọ chọrọ bụ ịnọgide na-ebi ndụ nrọ ya site n'aka nwa ya nwoke. Na mbido, nna ya kpughere Lautaro Martinez na agụmakwụkwọ egwuregwu nke nyeere ya aka ịkọwa ebumnuche ndụ ya, nke na-aghọ ọkachamara n'ịgba ọsọ.
Beingga n'ihu n'egwuregwu ahụ na mkpebi siri ike iji nwee ihe ịga nke ọma nyere Lautaro nkwuwa okwu ịmalite ịga ọmụmụ ihe egwuregwu na Liniers, ụlọ ọgbakọ dị na obodo ahụ. Inweta ọtụtụ ihe n'aka nna ya kwụrụ ụgwọ maka nke ọma Lautaro dara ọnwụnwa ya ma nabata ya na klọb.
Lautaro Martínez Nwatakịrị Akụkọ nke Na - Ndụ Ndụ Mmalite:
N'oge ọ na-eto eto na klọb mgbe ọ bụ nwatakịrị, Lautaro aghaghị iji ụgbọ okporo ígwè na bọs na-aga ma si na ezinụlọ ya gaa ebe a na-akụzi agụmakwụkwọ. Ọ na-alaghachite n'uhuruchi wee na-eme njem ọzọ n'ụtụtụ.
Lautaro, na 2013, mgbe ọ ka na-egwuri egwu na Liniers. Ebe e si nweta ya OLE.
Lautaro Martinez gbasoro nlekọta nke nna ya na nke a hụrụ ka ọ na-aga nke ọma na sọọsọ ntorobịa nke agụmakwụkwọ Liniers. Ọchịchọ ya tolitere na ọganihu ya na nke a kpaliri ọchịchọ ịga ụlọ akwụkwọ agụmakwụkwọ buru ibu.
Lautaro Martínez Biography - tozọ a ma ama Akụkọ:
Lautaro Martinez nwere mmechuihu n'oge ọ dị afọ iri na ụma. Na 15, ndi otu Boca Juniors tiri ya ihe wee kpọọ ya oku maka ule. Ị maara?… Ndị klọb jụrụ ya na-emesi ya ike na ya erughi ka ọ kpọọ ha.
Ha gwara m na enweghị m ike ma ọ bụ ọsọ ọ bụla na m nwere ike ịlọghachi ma ọ bụrụ na arụrụ m ọrụ na ya. Ọkara m gbara arụkwaghịm na iwe. ”
Lautaro Martinez adaghị mbà. Otu afọ gachara, ụdị ọmarịcha ihe dị na ntorobịa dọtara uche onye nkuzi oge ịgba ọsọ nke Club Club Fabio Radaelli bụ onye bịanyere aka na ya na Jenụwarị 2014. Mgbe ọ nọ n'ụlọ akwụkwọ agụmakwụkwọ ahụ, Lautaro jisiri ike mee ihe mgbaru ọsọ 26 na egwuregwu 26, njirimara nke nyere ya ogo ọrụ.
Lautaro Martínez ụzọ maka akụkọ ama ama. Ebe E Si Nweta OLE.
Site na arụmọrụ ya, ọla nke Racing dịka a na-akpọ ya ka akpọrọ oku ka ọ nọchite anya obodo ya ma kpọọ egwuregwu na Alcudia. Ị maara?… Lautaro pụtara dị ka onye ọkpụkpọ ihe kachasị elu na onye egwuregwu kachasị mma nke asọmpi ahụ.
Lautaro Martínez okporo ụzọ maka akụkọ ama ama - Afọ ebube. Ebe E Si Nweta IG.
Lautaro Martínez Bio - Bilie na-ewu ewu Akụkọ nke:
Onye nwere ọgụgụ isi nwere obi uto ngwa ngwa tupu ya etolite etolite etolite maka klọb ya ma na-anọchitekwa obodo ya.
Lautaro diri ntuli aka nke meteoric n'ihi mwakpo ya na ike mgbaru ọsọ, ihe egwu mere ka ụlọ ọrụ mgbasa ozi nke Argentine wee hụ ya dị ka “obe n’etiti Sergio Aguero na Gonzalo Higuain".
Lautaro Martínez Bilie na-ewu ewu Akụkọ. Ebe E Si Nweta La Nación na El Territorio.
Ọ kwụsịghị ebe ahụ, nnukwu klọb ndị ọzọ dịka Real Madrid, Valencia, Atletico Madrid na Inter Milan bidoro ịrịọ ikpere na ikpere maka mbinye aka ya.
Onye Argentina mechara rute n'ụkwụ ya na Europe na inter Milan meriri ọkpụkpọ nke inweta ya. Mgbe ọ nọ na klọb ahụ, ụlọ ọrụ nke onye obodo ibe ya na Mauro Icardi nyere ya aka. Na Inter, Lautaro malitere imebi ndekọ n'agbanyeghị na-eji ya dochie anya.
Ogo ya di na nmekorita nke 2019 COPA America ebe ya na nmekorita di egwu Lionel Messi.
Lautaro Martínez na Lionel Messi na-emekọrịta ihe- Bilie Nwee Akụkọ. Ebe E Si Nweta Yahoo News.
Ọrụ Lautaro rụrụ na asọmpi ahụ mere ka ndị egwuregwu kpọọ ya 'ọdịnihu' nke football Argentine. Obi abụọ adịghị ya, ụwa nwere ike ịnọ na njedebe nke ịhụ nwatakịrị ọzọ na-eto eto ka ọ ghọọ onyinye klaasị nke ụwa n'ihu anyị anya.
Lautaro Martinez bụ n'ezie otu n'ime usoro mmepụta enweghị ngwụcha nke ndị egwuregwu na-awakpo ihe ịtụnanya na-apụta site na Argentina. Ndị ọzọ, dị ka ha na-ekwu, bụ akụkọ ihe mere eme.
Lautaro Martínez Love Story na Sol Pérez:
Lautaro Martínez dere Sol Pérez ruo mgbe ọgbaghara ha malitere nke mere ka nkewa ha ke 2017. N’agbanyeghi na ha di ezigbo ka ndi ihunanya na foto nke di n’okpuru, ndi ozo huru oru kariri mgbe ha na ha na-eme mmekorita.
Lautaro Martínez dere ụbọchị Sol Perez. Ebe E Si Nweta Afaae.
Ihe ịrịba ama nke mmebi ha malitere mgbe Sol Perez achọghị ịhapụ Argentine gaa Italytali mgbe a kpọrọ enyi ya nwoke ka ọ kpọọ maka Inter Milan.
"Anyị nwere ebumnuche dị iche. Achọrọ m ịnọ na Argentine, ịrụ ọrụ,”Kwupụtara Sol onye mgbasa ozi na-akpọ 'ihu igwe nwanyị'. Ọ gara n'ihu,O doro anya, ọ ga-adịrị m mfe karị ịpụ ma biri na Italytali, nke bụ eziokwu bụ na m họọrọ ịnọ ebe a, na-arụ ọrụ elekere 24. Lautaro hapụrụ m pụọ n ’nzuzu. Enweghị m ịhụnanya n’ebe ọ nọ n’ezie ka anyị lụrụ ọgụ dị ukwuu, ọtụtụ."
Chọta Lovehụnanya Ọzọ:
N'oge na-adịghị anya Lautaro Martínez hụrụ ịhụnanya ọzọ. N'azụ superstar, enwere enyi nwanyị mara mma na ihe nlere nke aha ya bụ Agustina Gandolfo. O kwetara iso ya gaa Europe.
Lautaro Martínez Nwanyị nwanyị. Ebe E Si Nweta IG.
Ma ndị hụrụ ya n'anya, Lautaro na enyi ya nwanyị Agustina malitere dị ka ezigbo ndị enyi na ngwa ngwa, mmekọrịta ha ghọrọ “Ezigbo ịhụnanya”Dị ka ekpughere site na ihunanya uploads na ha na-elekọta mmadụ media peeji nke.
Akụkọ ịhụnanya nke Lautaro Martínez na Agustina Gandolfo. Ebe E Si Nweta IG.
Na-ekpe ikpe site n'ụzọ abụọ ndị hụrụ n'anya na-eme ka ịhụnanya ha sie ike, ọ bụ obere oge tupu Agustina Gandolfo abụrụ nwunye enyi ya na-ahụ n'anya.
Lautaro Martínez akụkọ nke na - Ndụ Nke Onwe:
Enwere okwu na ọ nweghị iguzosi ike n'ihe fọdụrụ na egwuregwu bọọlụ nke oge a. N'ezie, nke a anaghị echebara echiche dị n'etiti Lautaro na nkịta ya mara mma nke esere n'okpuru.
Lautaro Martínez na Nkịta ya. Ebe E Si Nweta ka Twitter.
Lamara Lautaro Martinez ndụ nke onwe ya pụọ ​​na egwuregwu bọọlụ ga - enyere gị aka inweta nkọwa zuru oke banyere ya. Na-amalite, ọ bụ onye nwere obi ọla edo, onye nwere obi ebere. N'agbanyeghi otutu ihe ndọpụ uche nke ọrụ, Lautaro kwụsịrị n'oge ọrụ ya na Racing ọ na-ewepụta oge ileta ma nye ndị ọrịa nkasi obi.
Lautaro Martínez Ndụ Nke Onwe-Obi Ya. Ebe E Si Nweta ka Twitter.
Lautaro Martínez Ndụ Ezinụlọ:
Banyere Lautaro Martinez Nna: A na-akpọkarị ya Mario Martínez. Ọ bụ ezie, a kpọrọ ya aha otutu "Pelusa" n'oge egwu ya.
Mata Nna Lautaro Martinez- Mario. Ebe E Si Nweta ka Twitter.
Dị ka onye na-agba ụkwụ, Mario Martinez nọ na-arụ ọrụ na 1972 ruo afọ ise mgbe ọ na-egwuri egwu na Argentine National B. Afọ na-esote mgbe ọ hụrụ ya adịghị ebi ndụ na-atụ anya ọrụ, chere ihu na football amateur na nsogbu ego.
Mario Martinez kwetara n'otu oge na nrọ ya bụ ịhụ ka nwa ya nwoke Lautaro zụrụ Pep Guardiola. “Ka anyị doo anya, Otú ọ dị, nke a bụ nanị uche m dị ka nna, ” otu mgbe kwuru na ịgbachitere nwa ya nwoke.
Banyere Lautaro's Martinez nne: Karina Vanesa Gutiérrez bụ nne ya. Ọ bụ ụdị nne na-enwe mmụọ nke ukwuu maka ọganiihu nwa ya nwoke.
Banyere Lautaro Martinez Mama- Karina Vanesa Gutiérrez. Ebe E Si Nweta-IG.
Lautaro kwuru otu oge banyere nne ya;
"Mgbe egwuregwu nke m duuru ndị otu m gaa mmeri, akpọrọ m mama m. Mgbe ọ zara, anụrụ m ka ọ na-ebe ákwá: Ama m na ọ na-enwe obi ụtọ maka m n'ihi na ọ ma ego ole m ga-echapu".
Banyere Lautaro Martinez Siblings: Dịka anyị kwuru na mbụ, Lautaro Martinez nwere ụmụnne abụọ- aha ya bụ Alan na Jano. Ọ bụ ihe dị nta banyere Alan Martinez. Agbanyeghị, a maara Jano nwanne ya nwoke nke obere (nke a sere n’okpuru ebe a) n’enwela ọganiihu nke ya
Nwanna Lautaro Martínez- Jano Martinez. Ebe E Si Nweta IG.
Ị maara?… Ugbu a ọ bụ onye na-agba bọọlụ na basketball nke Argentine. Naanị 14 (dị ka n'oge edere), Jano bụ otu n'ime nkwa ntorobịa nke basketball Argentine.
Mgbe ọ gabigara mgbasa ozi mmekọrịta ya na ọtụtụ blọọgụ nke na-ede banyere 'Ihe ndị ị nwere ike ịmaghị gbasara Lautaro Martinez', Anyị achọpụtala na ọ bụghị ụdị ndị na-agba ọsọ na-ebi ndụ na-adọrọ adọrọ.
Ndụ ụdị ndụ ahụ jupụtara n'ọmarịcha ụgbọala dị oke ọnụ, WAGs mara mma na ụlọ ndị okomoko.
Lautaro Martínez LifeStyle. Ebe E Si Nweta IG.
N'ikwu okwu site na foto a, ị nwere ike ikwenye anyị na Lautaro Martinez na-ebi ndụ dị mfe. Ọ dị ezigbo mma na ijikwa akụ ya, ọ naghị emefu ego dika nzuzu.
Lautaro Martínez Eziokwu Eziokwu:
Afọ ahụ “1997” mgbe a mụrụ Lautaro, ihe ndị a mere.
Eziokwu Lautaro Martínez. Ebe E Si Nweta Anandtech na Telegraph.
(1) Princess Diana egbuola na Paris France n'ihe ọghọm ụgbọ ala ebe paparazzi na-esochi ya. (2) E wepụtara ihe nkiri ihe nkiri-ọdachi (Titanic). (3) Ihe uwa marala ugbua ka ewebata Wi-Fi.
Ogbugbu: Lautaro patronizes Ogwu Mandinga ụlọ ahịa dị na Buenos Aires, Argentina. Ogbugbu ya na-enye ya uzo ka mma iji gbochie onwonye anya dika ihe onyonyo na egosiputa mbido ya na akuko ya.
Mkpado Lautaro Martínez.
Religion: Ọtụtụ ndị bi n'obodo ya (Bahía Blanca) bụ ndị Roman Katọlik n'agbanyeghị na enwere ụka Protestant na ụlọ nzukọ. Na-ekpe ikpe site n'eziokwu a, ọ ga-abụ na Lautaro Martinez bụ onye Kraịst nwere okwukwe Katọlik.
Lautaro Martínez nwa akụkọ akụkọ na - Video Nchịkọta
Nyochaa: Daalụ maka ịgụ akụkọ nwata anyị Lautaro Martinez gbakwunyere Untold Biography Facts. Na LifeBogger, anyị na-agbasi mbọ ike maka izi ezi na ịkwụwa aka ọtọ. Ọ bụrụ n'ịchọta ihe na-adịghị mma, biko kekọrịta anyị site na ịza ajụjụ n'okpuru. Anyị ga-eji nkwenye gị kpọrọ ihe mgbe niile.